Microsoft Office ee Linux, ra'yigeyga shaqsiyeed | Laga soo bilaabo Linux
Microsoft Office on Linux, ra'yigeyga shaqsiyeed
Hyuuga_Neji | | La cusboonaysiiyay 08/02/2013 15:33 | GNU / Linux
Maalmihii la soo dhaafay warku wuxuu faafinayay ujeedooyinka shirkadda weyn ee Redmond (Microsoft) si loogu daro sanadka 2014 qayb ka mid ah xafiiskeeda xafiiska oo ku yaal nidaamyada GNU / Linux. Warku wuxuu igu soo gaadhay siyaabo kala duwan waxaana durba jira in kabadan mid inaga mid ah oo ka cadhooday go'aanka sababo laxiriira in ka mid noqoshada deegaanka GNU / Linux ee xafiiska xafiiska mid ka mid ah kuwa ugu xun ee wax u dhimaya Software Free. Ujeedada maqaalkani waa si sax ah in la isku dayo in ra'yigayga laga dhiibto tan.
1 Microsoft Office sida Office Suite
2 Saamaynta bulshada GNU / Linux
3 Fikrad shaqsiyeed
Microsoft Office sida Office Suite
Ma aha wax qarsoodi ah qofna in xafiiska ugu isticmaalka badan adduunka ee loo yaqaan 'Office', qofku wuu bixi karaa oo wuxuu weydiin karaa xirfadle ama kaaliye kasta waxa ay yihiin xafiiska xafiis jawaabtuna waxay u badnaan doontaa iyada oo aan libiqsaneyn ... Xafiiska , Hore ayaan u ogahay inay noqotay wax ka badan Word, Excel iyo PowerPoint ... hadda waxay leedahay adeegyo loogu talagalay dadka isticmaala oo waliba waxyaabo ku jira daruuraha.
Tan iyo markii uu xafiiska 2007 soo baxay kaliya ugumuu keenin sida ugub ah qaabka cusub ee farxadda leh (docx, xlsx, pptx iwm) ee siiyay in ku filan oo lagu hadlo laakiin, Adeegga Xidhmada 1 ee Xafiiska 2007 waxay horeyba ugu dartay tallaabooyinka ugu horreeya ee Microsoft ee la jaanqaadka Suites-ka kale ee suuqa yaala sida OpenOffice iyo LibreOffice, tani macquul ahaan waxaa u sabab ahaa buuqa ka dhashay ku darista docx ahaan halbeeg iyo wax kasta oo kale oo waqtigaas si aad ah looga hadlay.
Nooca 2010 ayaa horeyba ugu yimid asal ahaan iswaafajintaan asalka ah sida ay yiraahdaan wuxuu keenayaa nooca cusub ee 2013 oo aanan wali awoodin inaan tijaabiyo naftayda markaa waa inaan sii joogaa oo aan idhaahdaa waxyaabaha aan ka aqriyay boggaga kale sida Genbeta, Engadget Windows iwm
Saamaynta bulshada GNU / Linux
Marka xanta waxa ay rabaan inay ku sameeyaan Redmond la ogaado, waxa ugu macquulsan ayaa si hufan loola yaaban yahay haddii ay mudan tahay in lagu bixiyo shaqo aad u badan sidii wax soo saar loogu samayn lahaa qayb inta badan bilaabatay adeegsiga GNU / Linux maxaa yeelay iyagu ma doonayaan inay wax ka ogaadaan. Wax soo saarka iyo rukhsadaha Microsoft. Sidoo kale waa in maskaxda lagu hayaa in Xafiiska oo asal ahaan ka soo jeeda Linux uusan macnaheedu ahayn inay la imaanayso ruqsadda GPL, marka si kasta oo ay ula jaan qaadaan Linux do. waxay had iyo jeer noqon doontaa Xafiis leh liisan lahaansho.
Fikradayda shakhsiga ah, uma maleynayo inay tani tahay tallaabo wanaagsan oo ay qaadatay Microsoft maadaama ay si toos ah u ahayd isla maqnaanshihii Xafiiska ee GNU / Linux deegaanadeed taasoo keentay dhalashada Suite kale oo maanta aysan waxba ka xaasidin Xafiiska sida uu yahay. Kiiska LibreOffice 4.0 ee dhawaan arkay iftiinka iswaafajintiisa la hagaajiyay ee kaniisadda (midnimada) oo aqbalay nidaamka dadka Firefox iyo in kasta oo aanan u muuqan isbedel badan muuqaalkiisa guud (waxyaalo badan oo sida aan u qaylinayo ah) uu xusay qiyaastii 1500 ayaa isbeddelaysa koodhkeeda asalka ah iyo sidoo kale iswaafajinta wanaagsan ee qaababka Docx iyo RTF oo raadinaya fudeyd iyo kacsanaan badan.
Microsoft iyo Office waxay awoodi doonaan inay wax yar ka qabtaan liisankooda gaarka ah iyo kan qaaliga ah (liisanka xafiiska wuxuu ahaa 100-euro oo euro ah markii ugu dambeysay ee aan hubiyo xogtaas) oo ka soo horjeeda qaybta haysata shatiga GPL oo ficil ahaan bilaash ah. Shaki nagagama jiro in Microsoft ay raadineyso waddo ay lacag kaga sameyso dhaq-dhaqaaqan… hadda waxa ay ciidamada Steve Ballmer isku raaceen oo ay u sii daayeen nooca cusub; Kan halkan joogaa wuxuu sii wadaa inuu qoro qoraalladiisa isagoo adeegsanaya LibreOffice 3.5.1.2 kaas oo aan rajeynayo inaan ku helo nooca 4.0 (oo saaxiibkiis soo dejiyey) hadda waa adiga adigu go'aansada inaad isticmaasho ama aad u isticmaasho ikhtiyaarka Xafiiska ee Linux iyo waxa ugu weyn. .. sagxad leedahay
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Microsoft Office on Linux, ra'yigeyga shaqsiyeed
55 faallooyin, ka tag taada
Si adag ugu raac fikradaada.
Xafiiska Libre waa qalab aad u wanaagsan waana sii wadi doonaa adeegsiga xitaa haddii Xafiiska yimaado Linux.
Ma dhihi karo wax la mid ah Adobe, waan ogahay inay jiraan waxyaabo kale oo badan oo ka mid ah qalabyada Adobe, laakiin waxay noqon laheyd hoot lagu isticmaali karo Linux O :)
Marka hore, waa inaan sheegaa inaan ahay isticmaale GNU / Linux (openSUSE) dhowr sano hadda, laakiin sidaad jeceshahay iyo haddii kale, waa inaan u adeegsado MSOffice midkood iswaafajinta, macros, iwm.
Codsiyada xafiiska sida LibreOffice waxay gaareen heer biseyl weyn. Haddii qof kastaa isticmaali lahaa LibreOffice way fiicnaan lahayd, laakiin xaqiiqadu way ka duwan tahay sidii hore, arrinta iswaafajintuna culeys badan ayey leedahay.
Faalladaadu waa mid aad ansax u ah, laakiin waa inaad tixgelisaa qodobbada qaarkood.
1) Waqtigaan la joogo waa moodada in barnaamijyada lagu iibiyo khadka tooska ah. Iska ilow iibsiga softiweerka sanduuqa. Qaabka cusub waa Google Play Store ama App Store, Microsoft sidoo kale waxay heleysaa tiisa, marka tani waxay si weyn u yareyn doontaa kharashaadka ku bixi kara helitaanka softiweerka, maadaama aysan jiri doonin dhex dhexaadiyayaal (kuwaas oo kasbanaya goos gooskooda) iibinta barnaamijka. .
2) Waqtigan xaadirka ah, in badan oo ka mid ah isticmaaleyaasha softiweer ee bilaashka ah waa inay adeegsadaan adeegsiga MSOffice, ha loo maro Khamriga ama mashiinka aaladda casriga ah, sida aan dooneyno ama aan u rabin, waxay noqoneysaa "lama huraan".
3) Tallaabadan ay qaadayso Microsoft waxay kaliya muujineysaa in suuqa Linux uu soo jiidanaayo shirkadaha ganacsiga (Waxaan hubnaa inaan kororno tirada dadka isticmaala, xitaa haddii ay noo sheegaan inaan weli joogno 1%). Microsoft waxay kaloo rabtaa jaritaankeeda mana rabto in laga reebo xafladda. Waqtiyada ay Iyagu isbadalayaan.
Debian Gnu / Linux dijo
Waxaan xasuustaa fiidiyowgii ay shirkadda daaqadda ka samaysay dhalashada Linux; ayaa yidhi fiidiyowgu wuxuu ku dhammaaday weedh "Microsoft iyo LInux?" Xilligaas weedha maskaxdayda ka soo wareegtay "nidaamka ayaa ka xumaaday gudaha." Microsoft waxay ku bixisaa dhowr milyan oo doolar sanadkii dacaayad ka dhan ah Linux iyo dhamaan dhaqdhaqaaqa ilaha Furan. Dhamaanteen waan ognahay inaan nahay isticmaaleyaal badan oo ka badan caqligaas 1 ilaa 2%. Hadduu ka baxsan kari waayey dibadda ...
Uma isticmaali doono qolalkaaga, maadaama aanan isticmaalin OS-kaaga muddo dheer (waqti dheerna jidka agtiisa); si kastaba ha noqotee, waxaan ka baqayaa mustaqbalka Software-ka Bilaashka ah. Mudo intee le'eg ayey qaadanaysaa illaa Gates uu bulshada u geeyo afgembi deyn ah isaga oo adeegsanaya hubkiisa ugu weyn awoodda dhaqaale ee baaxadda leh ee uu haysto?
Jawaab Debian Gnu / Linux
Albaabo? Ninkaasi xitaa uma baahna inuu sankiisa ku dhejiyo MS dambe, oo lagu daro waxaad u hadlaysaa sidii milkiilayaashu u ahaayeen cadaw dhimasho, marka dhab ahaantii cadawga dhabta ah ee dhimashada ay yihiin uun taageerayaasha waddooyinka.
Ku jawaab Gustavo
Nooc dhexdhexaad ah. dijo
Aniga ahaan, waa isku day quus ah oo Microsoft ah.
Inay isku dayaan inay joojiyaan waxyaabaha kale ee AOO iyo LO "gudaha", maxaa yeelay waxay ku hanjabayaan qaybtooda OS kale sida OS X iyo xitaa Windows-keeda.
Kajawaabida nooca loo yaqaan 'Moderate Versionitis'.
Qofna ma sameeyo wax quus ku leh saamiga suuqa ee ka yar 1%. Aniguna kama hadlayo isticmaalka Linux guud ahaan, laakiin waxaan ka hadlayaa kuwa u adeegsada qaab ganacsi, kaas oo loogu talagalay cidda go'aankan inta badan loogu talagalay.
Waxaan codsan lahaa wixii Carmack yidhi
Waxay igu dhacday inaan iibsaday xafiiska iyo guriga ardayga, markii aan isku dayayna ubuntu markii ugu horaysay oo aan kari waayay, waxaan dib udajiyay daaqadaha, (sababta iyo dib udajinta ma xasuusto 100%) laakiin dib uma soo celin karo xafiiska, waxaan la wacay oo aan diray emayllo, jawaabta waxay ahayd waxba ma ay qaban karaan, in aan dhaafey rakibaadda la ii oggol yahay, ra'yigayga, alaabadaasi waa qashin.
Khibrada inta badan isticmaaleyaasha Linux, miyay joojinayaan isku dayga qashinka? Haddii xafiiska faraxsan uu leeyahay tiro kooban oo rakibid ah, miyay bixinayaan shatiyada 3 ama 4 rakib kasta?
Ma aha in qof kastaa uu tijaabiyo qaybinta qaab akhlaaqiyaad leh.
Waxaan ballanqaaday inaanan adeegsan doonin wax soo saarka Microsoft, in kasta oo uu jiro xafiis hooyo, aniga ahaan ma jiro.
Xafiiska sida osx, waa lagu shaqeyn karaa Linux, wax dhibaato ah uma arko, runti waxaan hubaa in qaar badan oo ka mid ah ay u ordi lahaayeen inay rakibaan qaar badanna ay jabsadaan sida ay uga dhacdo daaqadaha iyo osx. Go'aanka waxaa si toos ah loogu hagaajiyay suuqyada ganacsiga kuwaas oo ah kuwa lacag badan ku bixiya helitaanka qolka.
Nabad, Alf. Markii Xafiiska 2010 soo baxay (Uma dhaqaaqin Linux weli), waxaan doonayay inaan haysto. Kibir, waxaan Ahay qof adeegsada erey xoogaa horumarsan, xeelado badan ayaan aqaanay shaqooyin fiicana waan kala qabtay labada erey iyo PowerPoint. Waqtigaas, weli waxaan ahaa (postgraduate) arday ah oo marin u helka nooca dhaqaalaha, waxay ahayd inaan ku bixiyo kaarka amaahda, laakiin ma aanan haysan (Weligay ma yeelan, mana yeelan doono).
Waxaan ku sigtay inaan helo kaarka amaahda oo aan ku iibsado xafiiska 2010! Nasiib wanaagse, sannadihii ciidda Kirismaska-Sannadaha Cusub, waxaan isku dayay oo aan jeclaaday Linux. Waxay la jirtay Ubuntu 9.10. Waana halka aan ku helay shirkadda Microsoft.
Waxaan u maleynayaa mararka qaar inaan u xiisay erayga markaan la shaqeynayo Qoraa LibreOffice, gaar ahaan markaan tafatirka miiska. Si kastaba ha noqotee, runtii waan jeclahay Qoraa! Waxaan horeyba u aqaanaa dhamaan khiyaamada ay tahay inaan sameeyo kahor intaanan isticmaalin markaan badalayo qaybinta. Tan iyo markii aan isticmaalo laba luqadood, waxaan si fiican ugu shaqeeyaa mid iyo tan kale dhibaato la'aan. Waa inaad ka taxaddartaa goobaha gobolka iyo waxyaabo kale, laakiin wax walba hadda way fiican yihiin.
Waana taas, si hufan tan iyo markii aan u wareegay Linux, waan bartay mana joojiyo barashada waxyaabaha. Taasi weligay Windows iguma siin. Hagaag, waa hagaag, horay ayaan uga badiyay. Ah, laakiin waa inaan idhaahdaa markii hore waxaan u isticmaali jiray Xafiiska 2007 Wine, laakiin ma aanan jecleyn mar dambe. Waxaan ku rakibay ikhtiyaar dheeraad ah ... laakiin sannad ayaan ka tagay. Dinaar igama soo bixi doono jeebkeyga Microsoft, sida diinaar aysan ugu soo bixin bangiyada kaararka amaahda (Waxaan rajeynayaa inaanan waligey helin).
Waxaan iibsadaa ardayda xafiiska iyo guriga, waa isku mid sidaad sheegto. Aniguna saddex jeer ayaan soo ceshay (oo aan kujiray qaybta soo kabashada) dhibna iima siin in aan liisanka mar kale dhigo
In kastoo si daacadnimo leh, waxaan uga shakisanahay xafiiska dekedda microsoft inuu ku kaydiyo ...
Fiiri, faalladaydu waa sida soo socota:
Sigaarku ma wanaagsan yahay mise waa xun yahay? Kuwo badan ayaa oran doona waa shar oo aysan ku noolaan karin nolosha ... isla xafiiska M $ ayuu la mid yahay. Ugu dambeyntiina, qofkii doonaya inuu adeegsado wuxuu adeegsan doonaa M $ Office kii aan adeegsanina, wuxuu adeegsan doonaa LibreOffice ama ciddii ay jecel yihiin!
Hagaag, aniga igama dhibayso inay waqti ku qaataan inay sameeyaan nooc ka mid ah xafiiska loo yaqaan 'Linux'. Iima dhibayso maxaa yeelay ma isticmaali doono, sidoo kale uma maleynayo in isticmaale kasta oo isticmaala Linux uu isticmaali doono. Waxaad horeyba isugu dayday nero softiweerkaaga waxayna ahayd guuldaro aan fiicneyn. Isla sidaas ayaa ku dhici doonta qolka xafiiskan.
Dagaalyahan dibi ayaa hore u yidhi, "ha ordo, laba jibbaaran waa wareegsan"
Iyaga keligood ayaa niyad jabi doona.
MS Office inuu gaaro GNU / Linux, mmmhhh ???
Halkan dhexdeenna, iyo in BG uusan ogeyn, waxay noqon laheyd wax weyn, kor u kac weyn oo ay ku bixin lahayd dhammaan qeybinnada GNU / Linux. Maxaan sidaa u leeyahay? Si fudud maxaa yeelay celceliska isticmaalaha, oo ah aqlabiyadda adeegsadayaasha MS Windows, wuxuu adeegsadaa xafiiska xafiiska MS Office, oo ahaa cudur daar weyn sidaa darteedna dad badan oo isticmaala MA RABO inay u arkaan GNU / Linux inay yihiin OS soo jiidasho leh, oo leh fikrado "dukumiintiyadayda (docx, pptx, xlsx, iwm) uma muuqdaan kuwo aad ugufiican Libreoffice", "Ma jecli iskuxirka libreoffice", "MS Office iyo libreoffice isma waafaqsana". Sidaad u aragto, celcelis ahaan isticmaalaha wuxuu kaliya u adeegsadaa MS Windows inuu ka shaqeeyo Xafiiska, gaar ahaan shirkadaha, sidaas darteedna haddii qolka xafiiska MS ay u haajiraan GNU / Linux, mar dambe cudurdaar looma heli doono tiradaas tirada badan inay adeegsadaan a OS deggan, awood badan oo hufan sida GNU / Linux waa.
Waa wax dabiici ah in aqlabiyadda badan ee aqriya khadadkaan ay ka doorbidaan Libreoffice kan MS Office (oo aan aniga ku daro), laakiin taasi ma ahan fikirka aqlabiyadda adeegsadayaasha adduunka ee adeegsada OS aan ka aheyn gacaliyeheena GNU / Linux. Markaa haddii warku run yahay, MS wuxuu ku saabsan yahay, isagoon ogayn, inuu dhidibkiisa ugu horreeya geliyo naxashkiisa.
Waan ku raacsanahay Manuel qodobkan:
«2) Waqtigan xaadirka ah, in badan oo ka mid ah isticmaaleyaasha softiweer ee bilaashka ah waa inay adeegsadaan adeegsiga MSOffice, ha loo maro Khamriga ama mashiinka aaladda casriga ah, sida aan dooneyno iyo haddii kaleba, waxay noqoneysaa" lama huraan ".
Oo sidaasay ahaan doontaa ilaa LibreOffice, OpenOffice ama Calligra ay ka gaadhaan iswaafajin muddo dheer la sugayay sida inbadan oo naga mid ahi ay rabaan. Waa xaqiiqda adag, waxaa jira isticmaaleyaal badan oo leh Windows iyo MSOffice si kadis ah, xitaa haddii ay labaduba khiyaanooyin yihiin, kuwaas oo shaqadooda ku qabta halkaas wayna nagu adag tahay inaan ka aqrinno qol kale.
Arrintu waa tan soo socota, shirkadaha dan kama lihi nidaamka qalliinka, waxay kaliya codsanayaan inay helaan MSO iyo biraawsar.
Markaan intaas iri, aan isku dayno inaan siino milkiyadda faallooyinka. Waxay ka hadlayeen dhowr maalmood balooggan ku saabsan beddelka bilaashka ah ee MSO (OO iyo LO) ku dhowaad wax walbana waxaa loo gudbiyaa dhinaca garaafka, si daacadnimo ah waxay uga hadlayaan 1% qaybta muuqata ee barafka (33%). Heerka gudaha labadaba MSO iyo OO ama LO labadaba waa la isticmaalay, taasi waa sababta ay dadku u joojiyaan waxyaabaha yar yar sida isdhexgalka.
Markaan u dhaqaaqno adeegsiga "xirfadle aan shuruud lahayn", oo ah tan shirkadaha badankood, dhibaatooyinku waxay bilaabaan inay soo if baxaan. Xirfadlaha ku-meel-gaadhka ah waa eray aan ikhtiraacay, waxaan ula jeedaa aqlabiyad badan oo ah "xirfadlayaal" adeegsadayaal ah oo keliya isticmaala 20% waxqabadka barnaamijyadan. Heerkaan heerka shaxanka ma ahan mid xiise leh, runtiina waa wax aad u badan in la arko MSO 2003. Halkan waxaa muhiim u ah sheybaarada, xog uruurinta, xiriirka barnaamijyada kale, iwm. Waa qodob muhiim ah waxaanan rabaa inaad ku aragto tusaale. Qalab badan oo Sirdoonka Ganacsiga ah oo la shaqeeya Xogta Weyn, OLAP, iwm, xogta dhoofinta ee Excel ama sameeya soo dejinta Mashruuca, iwm iwm, waxaan rajeynayaa in farriintan la qabtay.
Kadibna wuxuu yimaadaa heer xirfadeed oo firfircoon. Waxaan haddaba uga hadlayaa barnaamijka VBA halkanna dhibaatooyinka OO iyo LO waa taariikhi. Macro inuu ka shaqeeyo mid ka mid ah markii ugu horreysay waa kuwan soo socda ee ka soo socda «Wax aan macquul ahayn», waa inaad la qabsataa koodhka ka dibna sii wadataa tukashada maxaa yeelay ma jiraan wax dammaanad qaad ah oo si fiican u shaqeyn doona, runtiina qaar ka mid ah fagaarayaasha takhasuska leh ee I akhriyey in Libreoffice Basic uusan mudnaan siin LO, taas oo haddii ay doorbidaan Python, iwm. Kuma imaanin duubab waa muhiim, nin muddo toban sano ah ka shaqeynayay macruufka VBA, kaliya ma weydiistaan ​​inuu beddelo qolka laakiin wuxuu bartaa luqad cusub. Tanina iyada oo aan la gelin arrimo aad u adag sida tanas sare ayaa loo isticmaalaa in lagu jeesjeeso barnaamijyo badan oo CRM ah. Haddii qolalka bilaashka ahi ay rabaan inay la qabsadaan adeegsadaha noocan ah, waa inay ka dhigaan aasaasiga mudnaanta.
Markaad fiirineyso panorama, haddii MSO uu yimaado Linux waxaan wajaheynaa dhacdo weyn oo Linux ah si loogu faafiyo adduunka qalabaynta xafiiska ganacsiga.
Ku jawaab krel
Haddii M. Office uu ka soo jeedo Linux wuxuu war wanaagsan u noqon lahaa desktop-ka Linux. Maalmahan, Linux ma maamusho inay isku soo rogto heer desktop, jawiga ganacsiga maxaa yeelay, dhaqan ahaan, M. Officie wuxuu hogaamiyaa suuqa. Waxaan u maleynayaa inay tani tahay warar been abuur ah maadaama Microsoft aysan ka hor imaan doonin OS-keeda haddii aysan dadka ka socda Bill Gate wax ka qaban nooc ka mid ah macluumaadka la xiriira 2014 Linux desktop desktop oo dib u laabaya daaqadaha sida OS hogaaminaya iyo in ugu yaraan ay doonayaan inay ilaaliyaan hoggaanka qaybta Xafiiska.
Waan kugu raacsanahay fikradaada.
Microsoft waxay horumarin laheyd oo keliya Xafiiska GNU / LINUX haddii saamiga isticmaalaha uu ka weynaado 2% ama boqolkiiba 1% suuqa kombiyuutarada sahanno badani daabacaan.
Waan ku dhajin doonaa LibreOffice xitaa haddii Micro $ badanaa macno ahaan u bixiyo qolkeeda. Waad iigu yeeri kartaa "Daalibaan Taalibaan", laakiin waxaad fahamsan tahay inaad diidmo iga haysato shirkad weyn oo had iyo jeer weerartay adeegsiga softiweer bilaash ah isla markaana ka faa'iideysatay booskeeda ay ku jirto oo xitaa lagu cambaareeyay. Way haysan karaan Xafiiskooda. Waxaan diidayaa inaan maro Micro $ oft hoop.
Ma doonayo inaan noqdo walxaha maadiga ah, laakiin sida 90% dadka isticmaala hadda ee wax soo saarka Microsoft, haddii aan waligay u baahdo, waxaan ku rakibi lahaa Taringa ama Argentinawarez sida caadiga ah.
Wanaagsan, fadlan sidaas samee, waxaan ku dhajinayaa fiidiyowyada dhammaan boggaga rasmiga ah ee MS halkaasoo ay ku cambaareeyeen GNU / Linux inay tahay nidaam shuuciya, sida kansarka kombiyuutarka iyo sida bahalka ah in haddii aynaan ku degdegin inaynu baabi'inno ay musuqmaasuqi doonto qiimaheena reer galbeedka Oo dumiya bulshadeena.
Waxaan rajeyneynaa inay 😀
Dacaayadaas siyaasadeed ee karaahiyada ahi waxay ahayd sabab kale oo aan loo mari karin Micro $ oft hoop.
Waxaan ku adkeysanayaa, tani waa wax furi kara hab wanaagsan oo Linux ah. Valve waa shirkad softiweer ah oo shirkad gaar u ah oo had iyo jeer lacag ka sameysa cayaarahooda. Markii ay ku dhawaaqeen noocyadooda Linux qofna (ama ugu yaraan ma aanan arkin) ayaa si weyn u soo baxay iyagoo difaacaya in aysan rakibaynin maxaa yeelay waa lahaansho, lacag iyo blablablabla. Taas bedelkeeda, intooda badani waxay u dabaaldegayeen tan muddo dheer maxaa yeelay wadayaasha garaafyada ee Linux ayaa ka fiicnaan doona, oo ka sii badan blah.
Tani waa isku mid, jilicsanaanta Linux ayaa ka sii fiican, maxaa yeelay suuqa adag ayaa bilaabi doona fiirinta Linux iyo horumarinta darawalada OS, iyo sida ugu badan ee Microsoft ujeedkeedu yahay inay lacag badan hesho (taas, kaalay, taas waa shirkad), inay ka fikiraan suurtagalnimada horumarineed ee Linux waa wax yar.
Intaa ka dib, haddii aad rabto inaad rakibto MSOffice iyo in kale, taasi waa arrin kale, laakiin dagaal badan iyo sheeko badan ka dib waxaan dooneynaa in Linux ay si guud u socoto, macno malahan soo bixida iyo cabashada markii ay fursad isu muujiso inay taasi dhacdo. Haddii kale, waxaan la heshiin doonnaa qaar badan oo ka mid ah kuwa u maleynaya inaan u adeegsanno Linux si aan u dareemo ka sarreyn iyo inaan ku faanno in (sida la filayo) aan ka ogaanno wax badan oo ku saabsan kombuyuutarrada qof kasta oo kale.
Dhab ahaan, sidee u dhaheysaa hadii aad rabto Linux in uu ka sii badnaado si looga hadlo "International" wuxuu la macaamilaa barnaamijyo badan oo software ah, haddii aad go'aansato inaad rakibto iyo haddii kaleba adiga ayey kugu xiran tahay, laakiin waa tallaabo ay dadka bilowga ah ku dhiirranayaan inay tijaabiyaan Linux waxyarna tartiib tartiib tartiib tartiib ah ayaan ku ogaadaa faa'iidooyinkiisa, maadaama shirkado badan ay ku dhiiranayaan inay soo saaraan barnaamijyadooda ku saabsadan iskudhafka (Xaaladdeyda waxaan jeclaan lahaa ciyaaraha tan iyo markii aan ahay gamer wadnaha xD)
Haddii ujeedka Microsoft uu u qoondeeyo xafiiskiisa qaybta Linux ay run tahay, waxaan aaminsanahay in go'aankan ay dhiirrigelin doonto tirada badan ee ku tiirsanaanta dadweynaha ee u haajiraya Linux. Waxay noqon laheyd wado lagu yareynayo luminta dakhliga ay heystaan ​​sababtaan - "hadaadan iibsan ruqsadda OS, ugu yaraan aniga ii iibi liisanka Xafiiska" -.
Waxaan u maleynayaa inay sidaas tahay, haddii xanta ay run tahay waxay muujineysaa in daaqadaha sida OS-ku ay hoos ugu dhacayaan
Way ka fiican tahay qaadashada, ku qas koob wanaagsan oo khamri ah oo ku dhaji cabitaan, sababtoo ah Microsoft tani waxay u noqon laheyd heshiis kale oo wanaagsan.
Waxa aniga walwal igu haya ayaa ah waxa ku dhici doona dhamaan godadka amniga ee ay MS ku jiido barnaamijyadooda, waxaa jira waxyaabo fara badan oo loo yaqaan 'MS Office'.
Sababtoo ah waxaan ka shakisanahay in 100% dhibaatooyinkaas ay sabab u yihiin OS-ga oo uusan ahayn barnaamijka laftiisa.
Malaha uma isticmaali doonno, sidoo kale Nero oo loogu talagalay Linux taas oo ka sarreysay mid kasta oo ka mid ah barnaamijyada gubanaya ee aan ku haynay meelaha wax lagu keydiyo, laakiin had iyo jeer way fiicantahay in la helo xulashooyin. Sidoo kale, haddii aan aaminsanahay in cayaaraha Steamku ay ku jiraan Linux wax kasta oo lambarrada lahaanshaha ay fiicantahay, maxaa diidaya Xafiiska?
hehehe waxaan isticmaalaa nero linux 4 64bits. dhibaato waligeed, kama duwana brasero iyo kde, waligeed dhibaato kuma haysato guul pc iwm markaad ka tagayso cd furan oo aad rabto inaad wax ka qoroto guusha. Aad ayey u xun tahay in dadka nero aysan sii wadi doonin bixinta taageerada: /
Faalladayda shaqsiga ah, waxaan u arkaa in qaybta xafiiska Microsoft ay tahay tan ugu fiican ee shirkaddani leedahay, sidoo kale waxaan ku raacsanahay in LibreOffice ay aad u wanaagsan tahay, isla markaana ay wax badan ku horumarisay muddo gaaban; Laakiin kaalay, kuwa inaga mid ah oo adeegsada dhammaan kartida 'Excel' iyo 'macros' ee barnaamijka 'VBA' ee maareynta iyo falanqaynta keydadka macluumaadka waaweyn, runta ayaa ah, ixtiraam aan u hayo awoodda ay leedahay, iyo sidoo kale sahlanaanta barnaamijyada 'macros' ee ku habboon qof kasta, iyo inuu awood u yeesho inuu xogta uga baaraandego sidaad doonto, wax aan xilligan, ku celceliyo, xilligan xaadirka ah, ay ka fog yihiin Calc.Sidaas iyo sababo kale awgood, waxaan ku bixin lahaa ruqsadda MS Office loogu talagalay Linux.
Waqtigan xaadirka ah laptop-kayga waxaan ku haystaa labo-boot, waxaan isticmaalaa kaliya Windows markii aan u baahdo inaan ordo oo aan falanqeeyo keydadka xogta ee waaweyn ee Excel, haddii kale waxaan isticmaalaa Linux inta badan. Haddii aan heli lahaa suurtagalnimada asalka Excel ee Linux, marna kama bilaabi lahaa Windows mar kale, maadaama xaaladdayda Excel ay tahay sababta kaliya ee aan u isticmaalo Windows. Waxaan sidoo kale u adeegsadaa codsiyada SPSS falanqaynta; laakiin nasiib wanaag kuwani waxay ku socdaan ganaax CrossOver, illaa iyo haddana ma aysan soo saarin qalad XD ah.
Sidaa darteed, ra'yigeygu waa haddii aan bixin lahaa liisanka MS Office ee Linux, horay ayaan ugu sameeyay Windows, sidoo kale waxaan u sameyn lahaa Linux, sidaasna waxaan ku iloobayaa Windows.
Marka loo eego fekerkeyga, haddii xantaasi run tahay, aan qiyaasno inay ku guuleysatay iibka, sidaa darteed, badeecadaha kale ee lahaanshaha waxay ku imaan doonaan cascade, sida: Autocad iyo barnaamijyo kale oo in kasta oo “lahaansho” ay aad ugu fiican yihiin goobahooda, ama ugu yaraan si fudud loo isticmaali karo, oo ka hadlaya heerka shirkadda, waa waxa aad raadineyso, inaad wax badan oo ka sii wanaagsan ku qabato, waqti yar.
Ku jawaab Carper
Waan idinla wadaagayaa. Ma doonayo inaan kalasoocno Calc, waa xalka xiisaha leh sida warqad furan laakiin iswaafajinta heerka sare ee VBA waa shay aad u muhiim ah oo uguyaraan ay tahay inuu kujiro khariidada wadada LO 4.X
Waxaan arkaa in qof walba uu codsado isdhexgal oo xoogaa ii dhadhan yar yahay, maxaa yeelay ma dhahayo looma baahna laakiin marka hore waa inay xalliyaan xaaladdan waxaanan ka baqayaa in cadaadiska caanka ah uu saameyn ku yeesho kala sarreynta mudnaanta. Dhamaadka haddii MSO ay u timaado Linux, wax umuuqda mid aad u fog maadaama aan u maleynayo in waxaas oo dhami ay leeyihiin qayb mala awaal sare ah, oo ah nooca doorka Cinderella, waan ku aqbali lahaa farxad. Iyo midkasta oo go aansada inuu isticmaalo iyo inkale.
Waqti ka hor waxaan arkay baahida loo qabo isticmaalka SPSS, runti waxaan ku haystaa Windows, laakiin waxaan la kulmay PSPP oo maaddaama ay ahaayeen xisaab fudud iyo xog yar ay u qalantay. Ma isku dayday?
Waxaan kuu sheegayaa haddii aan isticmaali lahaa PSPP; Laakiin nooca xogta waxay socotaa iyo iskutallaabyada falanqaynta, aniga shaqadayda aniga ilama aha, laga yaabee maalin maalmaha ka mid ah inaan heli doono heer aad u wanaagsan, hadda SPSS waa ii muhiim aniga.
Gabi ahaanba waad khaldan tahay. Waxa ugu fiican ee Microsoft haysato xilligan waa Xbox Xbox hahaha.
hahahaha waa waxa laga maqlo isticmaaleyaal badan, shaqsiyan ma ihi isticmaale ciyaar fiidiyoow ah; laakiin wixii yar ee aan arkay oo aan mar ciyaaray, waxaan qabaa inuu heer fiican leeyahay. Arintaan aniga khibrad uma lihi mowduuca; laakiin ciyaartooyda haddii ay fikrad fiican iyo isbarbar dhig ku sameyn karaan arrintan marka laga hadlayo tartamayaasha kale (Play Station, Wii ...)
"Macluumaadyo waaweyn oo kujira Excel"
Grrr… Akhrinta kaliya waxay i siinaysaa creeps !!
Muhiim maahan in M ​​$ Office uu la jaan qaadayo Linux waa inuu xumaadaa, ilaa iyo inta aan wali xor u nahay inaanan isticmaalin.
Aad ayaan u hayaa Halkan waxa ugu muhiimsan ee aasaasiga ah waa xorriyadda (gratuity wuxuu tagayaa asalka). Shaqooyinkaygu aad ayey muhiim u yihiin mana awoodo mana doonayo mana doonayo inaan ku xirnaado go'aamada shirkadda. Waxaan ubaahanahay WADARTA XORRIYADDA, waxaan rabaa inaan noqdo milkiilaha waxyaalahayga, waxaan ubaahanahay qaab OPEN ah oo xitaa aan khusayn astaamaheeda la diiwaangeliyey oo si guud loo heli karo. Sababtaas awgeed WELIGE, laakiin WALIGEY ma isticmaali doono qaab xiran mar kale, oo leh beddelaadyo bilaash ah (xitaa haddii ay isiiyaan).
@Juan Carlos, waxaan ku raacsanahay 100% faalladaada koowaad. Waxaan u adeegsadaa MS Office fudeyd iyo waqti (aniga oo aan ka nusqaaminaynin Libre Office), mana u maleynayo in isticmaalka softiweerka la sheegay ama wax kale (lahaansho), ay iga dhigeyso qof ka xun ama ka fiican, waxaan si fudud u adeegsadaa waxa aniga ii shaqeynaya .
Kahor intaanan isticmaalin Brasero iyo K3b (shaki la'aan K3b waa suite ku dhow oo qumman), duubista, laakiin waligey kuma guuleysan inaan helo midkoodna inuu si sax ah u duubo DVD-yada labada lakab ah, sidaa darteed waxaan go'aansaday Toast Titanium ee OSX waana intaas. … Dhibaatada la xaliyay.
Ma arko sababta riwaayad intaa le'eg leh oo aan la wadnay MS Office, aakhirkii aynaan danaynayn sababta oo ah maanaan rakibin, muddo.
Iyada oo tan Microsoft ay raadineyso faa iidooyin dheeri ah waana macquul maadaama ay shirkad tahay, laakiin lama inkiri karo in kastoo waxaas oo dhami ay u muuqdaan xulashooyin badan oo loogu talagalay dadka isticmaala GNU / Linux.
Waan ka xumahay waxaan ula jeeday: haddii aynaan danayn.
Microsft wuu ogyahay in caannimada Linux iyo isticmaalkeedu ay marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareerayaan, tan darteedna, waxay kasban doontaa isticmaaleyaal aad u tiro badan oo heerarka oo dhan ah
Tallaabadani, sida ay ila tahay, waa isku day ay Microsoft ku doonayso inay ku ilaaliso astaanteeda qalab kasta iyadoon loo eegin barxadda ay isticmaasho.
Waa uun kutiri kuteen
Sidii ay horay u sheegeen, tan waxaa dhiirrigeliya xaqiiqda ah in maamullada guud ee Yurub ay ogaanayaan (kuwa maxalliga ah ee hadda jira) inay jiraan waxyaabo ka wanaagsan oo m.off jira
Dhinacyadu waxay helayaan keyd weyn sababo la xiriira booditaanka liisamada, waxaana jira rukhsado aad u yar.
Shirkadaha iyo SMEs xaqiiqdii wax macno ah ma leh, maadaama ay jiraan xakameyn yar, laakiin maamullada guud ee Yurub iyo ururrada siyaasadeed ayaa ah kuwa ugu muhiimsan hadda, waxayna gebi ahaanba halis gelinayaan suuqa ruqsadaha wax soo saarka xafiisyada.
Waxaan rabaa inaan ra'yigayga ku biiriyo seddex qaybood:
1.- MSOffice waa sheyga ugu fiican guriga, marka qofku waa inuu sameeyaa dukumiintiyo xirfad leh oo eray ahaan ah, ma jiro xal bilaash ah oo la mid ah. Aniguna xitaa ma doonayo inaan wax ka faalloodo Saldhiga ama Calc.
2. - Nooca MSO ee OSX waa mid laga naxo, ku dhowaad waxba kuma lihid nooca Win. Waxay dareemeysaa qasab, waxayna weyday xiddigteedii weynaa ee "Access". Waxaan rajaynayaa oo kale in ayna ku dhicin Linux.
3.- Waan ku raacsanahay faallooyinka qaar, dadka badankood waxay isticmaalaan kaliya 20% ka mid ah kartida MSO, iyo adeegsigaas kala duwan, LibreOffice ayaa ah tan ugu fiican, sidaa darteed waxaan ku dhiirigelinayaa qof walba inuu fursad siiyo.
PS: Anigu waxaan ahay qof ku qanacsan Libreoffice waxaanan u maleynayaa inay leedahay mustaqbal rajo leh, laakiin wali waxay haysaa waddo dheer oo in la maro ah.
Ku jawaab pepenrike
Maaddaama aan ahay isticmaale isticmaale Software-ka Bilaashka ah, waa inaan dhahaa in laga shaqeeyo heerka ganacsiga MS Office waa lagama maarmaan, in ka badan u adeegsiga iyo arrimaha murugsan, waxaa loogu talagalay arrimaha iswaafajinta, haddii aan rabno ama aan dooneyno in shirkadaha badankood ay yeeshaan Windows oo ay isticmaalaan Xafiiska, shaqsiyan waan ku xumahay isticmaalka mid ka mid ah qolalka xafiiska marka ay timaado dukumiintiyada shaqsiyadeed waxaan u adeegsadaa Libreoffice si aan kuugu sahlanaado maaddaama aan Archlinux u adeegsado laptop-kayga shaqada waana wax aad looga xumaado in la daarto mishiinka meheradda ah ee la shaqeeya MS Office, laakiin dukumiintiyada aan ku siineyno macmiilku waa inuu lashaqeeyaa MS Office sababaha iswaafajinta qaababka isla macmiilku sameeyay.
Anigu shakhsiyan waxaan jeclaan lahaa in la helo qaybta MS si aan u awoodo isticmaalka Linux iyadoon loo baahnayn in la shido mashiinka meertada ah kaliya dukumiintiyada.
Kuwa aan isku deyin, halkan waxaan uga tagayaa 2 PPS oo leh eray sir ah oo lagu furi karo MSOffice laakiin aan lagu furi karin LibreOffice, OpenOffice ama Calligra, haddii aan tan xalliyo kuma tiirsanaan doono M $ Office dambe.
Waan sii wadi doonaa isticmaalka LaTeX halkii aan ka isticmaali lahaa Ereyga / Qoraha iwm. xD
Ku jawaab AlexAlex
Si fiican ayaan ugu xalliyaa erayga laakiin si kasta oo aan isku dayo inaan u barto LibreOfffice oo runta la ii sheego: waa SARE. Waxaad leedahay dhibaatooyin iswaafajin ah, tusaale ahaan haddii aad ka furato faylka LO markaa ma doonaysid inaad ku furto Win, laakiin waxaan u maleynayaa in iyada oo kordhinta LO ay wax badan hagaajiso.
90% dadka kugula taliyay oo rakibay Linux waxay ii sheegaan waxa la sameeyo si Office loogu rakibo, in ka badan kala bar iyaga ayaa aakhirki ka taga Linux, ama ku sii laba jibaar laakiin markasta asal ahaan Win.
Ma aqaano ujeedooyinka Xafiiska ee ku aadan talaabadan cusub, laakiin waxaan hubaa hal shay: Linux waxay qaadi doontaa boodbooyin weyn haddii Xafiiska runti uu sameeyo waxa uu sheego.
Ma aqaano haddii aan u isticmaali lahaa Xafiiska iyo in kale, uma maleynayo inay tahay su'aal ah $ iyo mabaadi'da, laakiin waxaan hubaa in 90% ka mid ah oo aan ku hadlo HADDII ay isticmaali doonaan, iyo sidoo kale inaan ka tago Win (ama kabaab yar).
Runtii ma fahmin xafiiska waxaanan u maleynayaa in tani aysan iyaga ku habboonayn, laakiin haye… waan arki doonnaa
Waxaan u maleynayaa in haddii Microsoft ay sii deyso Office for Linux aynaan jeclaan laheyn gabi ahaanba, sax 🙂
Humberto Salazar Pacios dijo
Uma maleynayo inay ku habboon tahay in la yiraahdo dadku waxay u beddelaan Linux maxaa yeelay iskama dhacaan liisamada Microsoft.
Ruqsaduhu wax yar ama aniga shaqsi ahaan wax kuma lihi xitaa sidaas darteed waxaan u wareegay Linux, maaddaama aan u arko inay tahay deegaan wax soo saar badan u leh horumarinta arjiga (Marka laga reebo .NET sababo muuqda). Marka lagu daro faa'iidooyinka aniga ii leh repo buuxa oo barnaamijyo ah oo laga heli karo LAN-ga.
Qofna kuma doodi karo, ama kuma dhiirran karo inuu ka hadlo xaqiiqda ah in Microsoft Office uu wax soo saar badan ka leeyahay kuwa kale ee hadda jira. Hagaag, waan aqoonsanahay horumarka Libre Office laakiin, aan wajahno, waxay ka dambeeyaan qarniyo Microsoft. In kasta oo ay xanuun badan tahay, haddana waa xaqiiqo dhab ah.
Fikradayda, waxay u noqon laheyd wax aad ufiican linux, suurtagalnimada awood u lahaanshaha xafiiska Xafiiska asal ahaan, tani waa bareeg loogu talagalay isticmaaleyaal badan. Hanuuninta ayaa noqonaysa mid aan loo baahnayn.
Waqtigan xaadirka ah waxaan kaliya u badali lahaa xafiiska Microsoft ee kan Google (faa iidooyinka ay leedahay marka laga eego dhanka shaqada iskaashiga ah) laakiin haye tan waxaan u baahanahay heer marin internet ah oo aanan awoodin, nasiib daro.
Jawaab Humberto Salazar Pacios
Waa run in badan oo naga mid ahi ay adeegsadaan Linux oo aan tixgelin siin arrimahan Ruqsadaha, ama openSource, kaliya waxaan u isticmaalnaa maxaa yeelay waa qabow, maxaa yeelay waa dhakhso, tan iyo tan. Waan hubaa in ka badan hal in aysan dhib ka qabin adeegsiga MS Office on Linux, liddi ku ah ... mana arko wax qalad ah oo ka jira, marka laga reebo in sida dhammaan barnaamijyada macaamiisha, waligeen ma ogaan doonno waxa ay sameyn karto dhabarka gadaasheena ...
Kaliya waa kutiri kuteen.
Microsoft waxay leedahay ereygii ugu dambeeyay, shirkadu wax war ah kamay soo saarin.
Xuquuqda kaliya waan aqriyay inay been tahay 🙂 mahadsanid satanas hahaha
ulises dhac dijo
Waxaan u arkaa inay ku habboon tahay Linux maaddaama isticmaaleyaal badan oo aan kombuyuutarro qaabeeyey ay diidaan nidaamkayaga doorbidista si sax ah sababtoo ah maqnaanshaha noocaas.
Jawaab u bixi boogaha
Telefoonka Ubuntu ma la heli doonaa Oktoobar?